Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: နည်းပညာတက္ကသိုလ် (စစ်တွေ)ရှိ ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံအေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တောင်းဆိုခြင်း
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (စစ်တွေ)ရှိ ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံအေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တောင်းဆိုခြင်း
နေ့စွဲ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (စစ်တွေ)ရှိ ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံအေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်။
(၁) အထက်ပါကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ (၁၇-၇-၂၀၁၂) အင်္ဂါနေ့တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်သည် နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရှိ ကျောင်းသား/သူများ မိမိဒေသတွင် မိမိတို့လုံခြုံအေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားရေးကို ထိခိုက်စေလျက်ရှိပါသည်။
(၂) (၁၇-၇-၂၀၁၂) အင်္ဂါနေ့ မွန်းလွဲ(၂) နာရီခန့်တွင် အရပ်ဝတ်ဖြင့် ထောက်/ပို့တပ်မှ တပ်မတော်သားဟုဆိုသူ (၃)ဦးအား ခတင်ပိုင်ရွာနေ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်များမှ ဝိုင်းဝန်းရိုက်ပုတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ထိုတပ်မတော်သားများ စီးနှင်းလာသည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်တစ်စီးအား ဘင်္ဂါလီ မူဆလင်များမှ ဝိုင်းဝန်းဖျက်ဆီးခဲ့ပါသည်။
(၃) ထိုအချိန်ခန့်တွင်ပင် နည်းပညာက္ကသိုလ်(စစ်တွေ)မှ ကျောင်းဆင်းလာသော ကျောင်းသား/သူများပါသည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ် အငှားယာဉ်တစ်စီးအား ခတင်ပိုက်ရွာမှ ဘင်္ဂလီမူဆလင်များက ဝိုင်းဝန်းတားဆီးခြင်း၊ ခဲနှင့်ပစ်ပေါက်ခြင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုအငှားယာဉ်မှာ အရှိန်နှင့် မောင်းနှင်၍ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။
(၄) သို့သော် ထိုလွတ်မြောက်သွားသော အငှားသုံးဘီးဆိုင်ကယ်နောက်မှ လိုက်ပါလာသည့် ကျောင်းသား/သူများစီးနှင်းလာသော ဒိုင်နာအငှားယာဉ်၊ မော်တော်ယာဉ်များနှင့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များဆီသို့ ထိုဘင်္ဂလီမူဆလင်လူမျိုးများ တုတ်၊ ဓါး၊ လက်နက်များကိုင်ဆောင်၍ ဆက်လက်အုပ်စုဖွဲ့ ချီတက်လာသောကြောင့် ထိုယာဉ်များပေါ်ရှိ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား/သူများသည် ကျောင်းဆီသို့ ပြန်လည်ဆင်းပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ရပါသည်။
(၅) (၁၇.၇.၂၀၁၂) အင်္ဂါနေ့ အဖြစ်အပျက်တွင် ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား/သူများ တစ်စုံတစ်ရာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါက ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား/သူများအတွက် အလွန်နစ်နာမည်ဖြစ်သည့်ပြင် ပဋိပက္ခမှာလည်း ပိုမိုကြီးမား ကျယ်ပြန့်လာကာ ရပ်ရွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုလည်း အလွန်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
(၆) ယခုအခါ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ဒုတိယနှစ်ဝက်စာမေးပွဲကြီးမှာလည်း နီးကပ်လာပြီဖြစ်ပါသဖြင့် ကျောင်းသား/သူများ ဆက်လက်၍ လုံခြုံစွာပညာသင်ကြားနိုင်ရေးမှာလည်း အလွန်အရေးကြီးနေပါသည်။
(၇) ထို့အပြင် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (စစ်တွေ)မှ စစ်တွေမြို့ထဲသို့သွားရာလမ်းတွင် ခရီးမိုင်နှစ်မိုင်ခန့်ဝန်းကျင် (သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ဖြင့် ၁၀ မိနစ်ခန့် မောင်းနှင်းရသည်) လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ရခိုင်လူမျိုးများ လုံးဝမရှိဘဲ ဘင်္ဂလီမူဆလင်လူမျိုးများ၏ ကျေးရွာများသာ တည်ရှိနေပါသည်။
(၈) ထို့ကြောင့် ကျောင်းသား/သူများ၏ လုံခြုံရေးကို အမြန်ဆုံးအထူးကြပ်မတ်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ရိုသေလေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။
- နယ်စပ်ရေးရာလုံခြုံရေးဝန်ကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ စစ်တွေမြို့။
- ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ စစ်တွေမြို့။
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အထွေအထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ စစ်တွေမြို့။
- ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (စစ်တွေ)၊ စစ်တွေမြို့။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 18:31
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: နည်းပညာတက္ကသိုလ် (စစ်တွေ)ရှိ ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံအေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တောင်းဆိုခြင်း . All Rights Reserved